श्रीमतीलाई अस्पतालमा राखेर ब्लड बैंक हिँडेका वृद्धको इज्जत सडकमै उतारियो ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/श्रीमतीलाई अस्पतालमा राखेर ब्लड बैंक हिँडेका वृद्धको इज्जत सडकमै उतारियो !
आइतबार साँझको ४ बजे, कालिमाटी चोकको सुनसान सडकमा हतारहतार पाइला चाल्दै छन् घनश्याम झा । लकडाउन कार्यान्वयन गराउन भन्दै कालिमाटी चोकमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी मात्र होइन, नेपाली सेना पनि खटिएको छ।
Are You The One He Wants To Die With?
घनश्यामले श्रीमती वीर अस्पतालमा भएको र आफू उनका लागि र-गत लिन सोल्टीमोडस्थित ब्लडबैंक जान लागेको भन्दै ‘माफ’ गरिदिन ‘याचना’ गरे । उनले अस्पतालले ब्लडबैंकलाई लेखेको पत्र पनि देखाए।
यो सब के भइरहेको छ भन्ने नबुझेका घनश्यामले निन्याउरो स्वरमा भने, ‘सर, म ब्लडबैंकबाट र-गत लिएर अस्पताल पुर्‍याउँछु, अनि यो ‘सर्ट’ फुकालेर फाल्छु है ।’ तर ब-न्दुक-धारी सैनिक गर्जिए, ‘खुरुक्क सर्ट फुकाल।’
घनश्यामले सर्ट फेरि उठाए, डस्टबिनतर्फ अघि बढे । तर, सर्ट लिएर घनश्याम फरार होलान् जस्तो गरी सैनिकले पहरा दिइरहेका थिए । अलिक पर फोहोर फाल्ने टोकरी थियो । सैनिकले ब-न्दकु-को नालले देखाएपछि घनश्यामले आफ्नो लुगा डस्टबिनमा फाले।
प्रहरीको कुटाइबाट घाइते कोरोना संक्रमितले उपचार पाएनन्